NATO oo Soomaaliya ka caawin doonta tababarrada iyo in la dhiso awoodda ciidamada dowladda – Radio Daljir
Seteembar 25, 2013 3:17 b 0
Doha, September 25, 2013 – Xoghayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Anders Fogh Rasmussen ayaa shaaciyey in ay jidad wanaagsan ku socdaan ciidamada AMISOM iyo howgalka nabad illaalinta Soomaaliya, isagoo sheegay in ay qayb ka noqon doonaan daddaalada nabada ee dalka ka socda.
NATO waxay sheegeen in ay kalin mug leh ka ciyaari doonaan howlaha nabad ku soo dabbaalida Soomaaliya ee wakhtigan, xili ay dowladdu guulo waa wayn ka gaartay dhinacyada nabadgelyada iyo horumarka siyaasadeed.
Mr. Rasmussen oo la hadlayey Aljazeera ayaa yiri ?NATO waxay ka caawinaysaa Soomaaliya in la dhiso awoodda ciidanka Soomaaliya, laakiin dagaalka ka dhanka ah argagixisada waa mid caalamka oo dhan uu ka siman yahay.?
Ugu dambayntii NATO waxay amaan u jeedisay dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya in ku dhow 7 sano, kuwaas oo ka qayb qaadanaya howl-galka nabbad ilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM, Mr. Rasummen ayaa midowga Afrika ugu baaqay in la taageero soomaaliya.
AU iyo Qaramada midoobey oo ficilo aan loo dul-qaadan karin ku tilmaamay weerarada Argagixisada